Faallo: Ameerika: Aqalka Cad iyo Donald Trump! – Kasmo Newspaper
Faallo: Ameerika: Aqalka Cad iyo Donald Trump!
Updated - November 9, 2016 3:51 pm GMT
Marwada Madaxweynihii hore, Hillary Clinton waa laga guuleystay. Waxaa ka guuleystay Donald Trump!
8dii November 2016 waxay gashay taariikhda in ay Ameerika keeni weyday Aqalka Cad qof haween ah. Donald Trump maanta waa Madaxweynaha la doortay, iyadoo ay hor-tuban yihiin taageerayaashiisa ku dhawaaqaya: U-S-A, U-S-A, U-S-A!
Xafiiskii ugu awood badnaa dunida waxaa loo doortay nin aan xil hore soo qaban, khibrad siyaasadeed lahayn, ololiisana ku galay wax kasta oo fadeexad ku ahaan jiray siyaasadda Maraykanka: been, isir-nacayb, faro-xumeyn haween, Islaam nacayb….
Sidaas darteed, malaayiin qaxooti ku yimid dalkii “The land of opportunity” ayaa wadnaha farta ku haya. Waxay sugayaan in Trump soo saaro amarkii lagu tarxiili lahaa, waxaana guusha Trump libin u tahay kooxaha ‘White Supremacists’ – meel kasta oo ay uga sugan yihiin caalamka.
Ameerika, ugu dambeys, ninkii afkiisa ka qirtay in uu faro-xumeeyo haweenka, Donald Trump ayaad Madaxweynihii 45aad u dooratay!